कसले लेला त जनसंपर्क समिति स्विजरल्याण्डको नेत्रित्व ? » नेपाल प्लस
कसले लेला त जनसंपर्क समिति स्विजरल्याण्डको नेत्रित्व ?
नेपाली कांग्रेसको भात्रि संगठन जनसंपर्क समितिको नयाँ नेत्रित्व लिने क्रम युरोपका बिभिन्न देशमा चलिरहेको छ । स्विजरल्याण्डको भूबनावट हाम्रो देशसित मिल्ने भएकालेपनि धेरैलाई चासो लाग्छ, यहाँ के भैरहेको छ । युरोपेली मुलुकमा बस्ने कतिपय नेपालीलाई भने स्विजरल्याण्ड सुन्दर र साह्रै महँगो देश भएकालेपनि चासो लाग्छ । त्यसैले यहाँ हुने गतिबिधि धेरैकालागि चासोको विषय बनिदिन्छ । अहिले हुन लागेको जनसंपर्क समिति स्विजरल्याण्डको अधिवेशनसँगै छानिने नयाँ नेत्रित्वका बारेमापनि धेरैतिर चासो छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी, यसका अन्य देशका भात्रि संगठनहरुमा त झन बढि चासो हुनेनै भयो । यहि १६ अप्रिलमा बर्न शहरमा हुन लागेको अधिवेशनकालागि जनसंपर्क समितिले तयारि गरिरहेको छ । यो तयारिका बिच अब को बन्ला त नेत्रित्वकर्ता ? यसको चासो झनै बढि छ ।
यस अघि राम महतो दुई कार्यकालका लागि अध्यक्ष भए । यस पटक श्याम सापकोटा अध्यक्ष बन्ने संभावना रहेको धेरैले बताएका छन् । निर्वाचन नगरिकनै नेत्रित्व छनौट गर्ने सहमतिमा नेपाली जनसंपर्क समितिका कार्यकर्ताहरु देखिएका छन् । तर निर्वाचन हुने अन्तिम अवस्थासम्म परिस्थितिहरु बदलिन सक्छन् । त्यसैले अध्यक्षको दाबेदार अर्को कोहि देखिएमा निर्वाचन नहोला भन्न सकिन्न । तर अध्यक्ष राम महतोले तेस्रो पटकका लागि दाबी नगर्ने, पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधी बनिसकेको अर्को पात्र नदेखिएको र हाल उपाध्यक्ष रहिसकेकाले श्यामनै अध्यक्ष बन्छन् भन्ने धेरैको तर्क छ । यदि निर्वाचन भएपनि श्याम सापकोटालाई टक्कर दिनसक्ने अर्को बलियो दाबेदार अहिलेसम्म देखा नपरेकोपनि बताइन्छ ।
श्याम सापकोटा भने एक्लैले केहि गर्न नसकिने हुँदा आफ्नो नेत्रित्वकालागि बलियो, आधार दिनसक्ने, देश र समाजकोलागि केहि गरेर देखाउन सक्ने खुबि र चाख भएकाहरुको समूह हुनुपर्छ भन्दै त्यसैको छलफल र तायारिमा देखिएका छन् । नयाँ समितिकालागि डा. सरोजराज घिमिरे र बिजय शर्मा दर्पणको नाम अगाडि आएको छ । कुन पद भन्ने यकिन नभैसकेतापनि सरोज घिमिरेको नाम उपाध्यक्ष वा महासचिवका रुपमा अगाडि सारिएको छ । मेरो जिल्ला डट कमका सञ्चालक बिजय शर्मा दर्पणको नाम भने प्रवक्ताका रुपमा उभ्याइएको छ । तर जिम्मेवारीका विषयमा यताउति हुन सक्ने नेत्रित्वका महत्वाकांक्षीहरु बताउँछन् ।
गैह्र आवाशिय नेपाली संघममा राजनिति हुन्न, गर्नुहुन्न भनिएपनि त्यहाँ गज्जबको राजनिति हुन्छ । बिभिन्न पार्टीका जनवर्गिय संगठनहरुकै खेल, नेत्रित्व र प्रभाव पर्छ । एन आर एनमा कसको नेत्रित्व हुने, कसले हाँक्ने र को प्रभावकारि देखिने भन्ने मुख्य भूमिका खेल्ने यिनै पार्टीका जनवर्गिय संगठनले हो । त्यसैले जनवर्गिय संगठ्नहरुलेपनि नेत्रित्व छनौट गर्दा एन आर एनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्ला भन्ने तयारिकासाथ छनौट गर्छन् । त्यसैले गर्दापनि जनवर्गिय संगठनहरुको निर्वाचन महत्वपूर्ण बनिदिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन, मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरु स्विजरल्याण्डमै हुनालेपनि नेपालबाट बिभिन्न पार्टीका नेता, मन्त्रि, उच्च प्रशासक र विशेषज्ञहरु विविध कामले आउने गर्छन् । त्यसले गर्दा स्विजरल्याण्डमा भएका पार्टीका भात्रि संगठनहरुको भूमिका अझ बढि चासो र चर्चायोग्य बनिदिन्छ ।
अधिवेशनको तयारि पुरा
यही अप्रिल १६ तारिखका दिन राजधानी बर्नमा हुन गईरहेको जनसंपर्क समितिको चौथो अधिबेशन सफल पार्न आवश्यक समितिहरुको गठन भएकाछन् । त्यस्तै, गठन गरिएका सम्पूर्ण समितिबाट पनि अधिबेशनको लागि तयारी पूरा भैसकेको छ ।
संघका अध्यक्ष राम महतोले स्विटजरल्याण्डमा रहेका सबैलाई यस मिति भित्र सँस्थाको साधारण सदस्यता ग्रहण गरिदिन र सदस्य बनिसकेकाहरुलाई अधिबेशनको दिन यथा समयमा उपस्थित भई नबिकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । यो निर्वाचनकालागि को को अतिथिका रुपमा आउने हुन् भन्ने यकिन भैनसकेतापनि युरोपमा रहेका जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरु अधिबेशनमा भाग लिन स्विजरल्याण्ड आउने जानकारि निर्वाचन समितिले दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: April 11, 2017